I-Fireside, iKhabhinethi yeeNdwendwe ezingaqhelekanga - I-Airbnb
I-Fireside, iKhabhinethi yeeNdwendwe ezingaqhelekanga
I-Fireside yindlu yezibini ezitshatileyo ezithandekayo eRed River Gorge. Ifakwe kwimizuzu nje ukusuka kwezona ndlela zibalaseleyo zale ndawo, imbonakalo entle, kunye nolonwabo, yeyona ndawo ifanelekileyo yokuchitha iintsuku zakho kulo mmandla mhle waseKentucky.
Eyenziwe ngesandla ukusuka phantsi ngo-2013 ngumchweli wesizukulwana sesithathu, le ndlu idibanisa isitayela esingapheliyo kunye neentuthuzelo zangoku.
-1 Igumbi lokulala
-1.5 amagumbi okuhlambela
-Ikhitshi exhotyiswe ngokupheleleyo
-Indawo yokuhlala evulekileyo
-270 ° Jonga
-I-Small Charcoal Grill
4.91 · Izimvo eziyi-218
I-Red River Gorge ikhethekile ngenxa yezizathu ezininzi, kwaye nokuba uceba ukuhamba usuku kude, jonga iindawo zokutyela zalapha ekhaya, okanye uchithe ixesha kwibhafu eshushu phantsi kweenkwenkwezi, iFireside yeyona ndawo ifanelekileyo yekhaya lakho.
Uya kufumana ulwazi malunga nepropati ngaphambi kokuba ungene kwaye usebenzise i-keypad ukungena kwi-cabin, kodwa sihlala sifumaneka ukuba kukho nayiphi na imiba evela ngexesha lokuhlala kwakho.